zkipster: कार्यक्रम र सम्मेलनहरूको लागि अतिथि सूची समाधानहरू Martech Zone
अर्को साँझ मैले कार्यक्रममा जाँच गरे। यो विशिष्ट व्यवस्था थियो ... केहि प्रशासकीय व्यक्तिहरू बहु-पृष्ठ छापिएको सहभागी सूचीबाट मेरो नाम जाँच गर्नका लागि scrambling। यसका लागि पृष्ठमा केहि मिनेट लिई, अन्ततः उनीहरूले मेरो नाम फेला पारे र यसलाई चेक आउट गरे - त्यसपछि एक अर्कालाई भन्दै सबैले यसलाई जाँच गर्न सक्दछन्। ठूला घटनाहरूमा म जान्छु, चेक-इनहरू अल्फाबेटिज्ड हुन्छन् ... र K सबै भन्दा लामो लाइनहरू जस्तो देखिन्छ! अक्षरहरू क्रुजको अन्त्यमा मानिसहरू सिधा भित्र।
मलाई मन पर्छ कि विश्वमा मान्छेहरु छन् जुन विश्वास गर्छन् कि ती समस्याहरु जुन सजिलै टेक्नोलोजीद्वारा ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। मान्छे मा zkipster त्यो मात्र गर्नुभयो, ट्याब्लेटहरू र स्मार्टफोनहरूको लागि क्लाउड अनुप्रयोग निर्माण गर्दै जसले कार्यक्रम स्टाफलाई सजिलै भेट्टाउन र सहभागीहरूलाई जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। मान्छेहरूमा जाँच गर्ने सबैले स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुन्छन् किनकि तिनीहरू सबै समान अनुप्रयोगबाट काम गरिरहेका छन्।
थप रूपमा, तिनीहरूसँग एक add-on सुविधा छ जसले ईम्पोस्टरहरूलाई तपाईंको घटनाहरूमा लुक्न रोक्न मद्दत गर्दछ। तस्विरहरु तपाइँको सहभागी सूची संग जोडिएको छ ताकि तपाइँ तिनीहरु लाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूले घटनामा जाँच गरेपछि। तपाईं पनि प्रणाली पठाउन सचेत हुन सक्छ जब VIP उपस्थितिहरू आउँछन्। उच्च विचार!
टैग: सहभागी सूचीपाहुना सूचीzkipster